सामसङको ग्यालेक्सी एस २० अल्ट्रा स्मार्टफोन नेपाल आउँदै, कति पर्ला बजार मूल्य ? - Technology Khabar
» सामसङको ग्यालेक्सी एस २० अल्ट्रा स्मार्टफोन नेपाल आउँदै, कति पर्ला बजार मूल्य ?
सामसङ नेपालले बजारमा अर्को साता ग्यालेक्सी एस सिरिजको प्रिमियम फोन सामसङ ग्यालेक्सी एस२० अल्ट्रा नेपाली बजारमा ल्याउने भएको छ।
यो एस सिरिजअन्तर्गतको फ्ल्यागसिप स्मार्टफोन हो। सो फोनमा १६ जीबी र्याम जडान गरिएको छ। यस फोनमा प्रयोगकर्ताले विभिन्न एप्स एकै पटक चलाउन सक्छन्।
यो स्मार्टफोनमा ६.९ इन्चको क्यूएचडी प्लस डाइनामिक एमोलेड डिस्प्ले रहेको छ । जसको रिफ्रेस रेट १२० हर्ज रहेको छ ।
यस फोनको मुख्य विशेषता भनेको यसको पावरफुल क्यामरा हो। यसमा १ सय ८ मेगापिक्सेलको क्यामरा जडान गरिएको छ। स्पेस जुम जडित यसफोनमा यसको सहायताबाट प्रयोगकर्ताले टाढाको वस्तुको पनि उत्कृष्ट फोटो लिन सक्ने कम्पनीको दाबी छ।
ग्यालेक्सी एस २० अल्ट्रामा क्वाड क्यामरा सेटअप रहेको छ भने फोनमा १०८ मेगापिक्सेलको मुख्य सेन्सर क्यामरा रहेको छ । यसका साथमा १२ मेगापिक्सेल प्लस ४८ मेगापिक्सेल प्लस टिओएफ थ्रीडी डेप्थसेन्सर राखिएको छ । यसमा १० एक्स हाईब्रिड अप्टिकल जूम फीचर हरेको छ ।
फोनमा ४० मेगापिक्सेलको सेल्फी क्यामरा रहेको छ । यसमा आइएसओसेल ब्राइट एचएम सेन्सर जडान गरिएको छ। यस फोनबाट ८के भिडियो खिच्न सकिन्छ। नेपालमा आउने एस २० अल्ट्रामा सामसङकै एक्सनोज ९९० चीपसेट राखिएको छ भने फोनमा ५१२ जीबीको स्टोरेज रहेको छ ।
यसमा पावरको लागि ५,००० एमएएचको ब्याट्री प्याक तथा ४५ वाट फास्ट चर्जिङ्गसपोर्ट रहेको छ ।
यहाँ आउने ग्यालेक्सी एस२० अल्ट्रा फोरजी फोन मात्रै हुनेछ अर्थात यसको ५जी भेरिएन्ट भने आउने छैन् ।
नेपाली बजारमा यो फोन कति मूल्यमा सार्वजनिक हुन्छ भन्ने जानकारी छैन् । तर कम्पनीले यसलाई १ लाख ६० हजार रुपैयाँको हाराहारीमा ल्याउन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।